निषेधाज्ञामा सरकारकाे विभेदकारी निर्णय: उड्न पाइने, गुड्न नपाइने
काठमाडौं– कोरोना भाइरस रोकथामका लागि भन्दै उपत्यकामा १६ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी हुने भएको छ। उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका प्रमुखहरुले एक साताको लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकले निषेधाज्ञा १५ दिनसम्म जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो।
निषेधाज्ञाको निर्णयसँगै राज्यले विभेदकारी नीति समेत लिएको छ। निजी तथा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आन्तरिक हवाई उडान भने सुरक्षा मापदण्ड पालन गर्दै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट के प्रश्न उब्जिएको छ भने जहाजबाट काठमाडौं आउँदा कोरोना नसर्ने र सार्वजनिक तथा आफ्नो निजी सवारीमा आउँदा भने कोरोना सर्ने रहेछ।
सरकारले भिडभाड बन्द गर्न निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको हो। तर, पछिल्लाे समय विमानस्थलमा भिडभाड बढेको छ। साच्चिकै भन्ने हाे भने केही दिनदेखि उपत्यकाको सबैभन्दा बढी भिडभाड हुन ठाउँ भनेको विमानस्थल बनेकाे छ। विमानस्थलकाे टर्मिनल भवनबाट जहाज चढ्न जान जहाजमा जति यात्रु सार्वजिनक यातायातमा पनि काेचाकाेच हुँदैन। तर, त्याे सयम छाेटाे हुन्छ भन्दै विमान कम्पनीले यात्रुलाई भन्दै आएका छन्।
यसबाट काेराेना सर्नलाई लामाे समयसम्म यात्रा गर्ने पर्ने हाे र? भन्ने प्रश्नसमेत उठेकाे छ। तर, सरकारले भने आन्तरिक हवाई उडानलाई निरन्तरता दिन निर्णय गरेकाे छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत अहिले दैनिक १२ देखि १३ हजार यात्रु आवातजावत गरिरहेको छन्। वैशाख १३ गते मात्रै काठमाडौं विमानस्थल हुँदै ६ हजार २ सय ९४ जनाले काठमाडौं छोडेका थिए भने ५ हजार ९ सय ५७ जना विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं प्रवेश गरेको थिए।
त्यति मात्रै नभइ बाँकेको नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी भएको एक साता पूरा भएको छ। तर,त्यहाँबाट अहिले दैनिक ५ सय भन्दा बढी यात्रु काठमाडौं आइरेका छन्। उपत्यकापछिको सबैभन्दा बढी कोराना संक्रमित भएको जिल्ला बाँके नै हो। तर, त्यहाँबाट भने निर्वाध रुपमा मानिसहरुले काठमाडौं आवातजावत गरिरहेका छन्।
लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी गर्नु भनेको एक ठाउँको मानिसले अर्को ठाउँमा गर्ने आवातजावात रोक्नु नै हो। तर, यहाँ त जहाजबाट यात्रु आउन दिने र सवारी साधन भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक १ सय २० वटा जति उडान तथा अवतरण भइरहेको छ। सरकारले १६ गतेबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णयसँगै हवाई कम्पनीहरुले उडान बढाएर सेवा दिने तयारीसमेत गरिसकेको छन्। वैशाख १४ गते मंगलबारमात्रै आन्तरिकतर्फ १ सय २८ वटा उडान तथा अवतरण हुने भएको छ। जसमा बुद्ध एयरको ६६, यति एयरको ३२, श्री एयरको १३, सौर्य एयरको ४, सीताको ४, समिटको ३, ताराको ४ र नेपाल एयरलाइन्सको ४ वटा उडान हुने भएको छ।
के भन्छन् यातायात व्यवसायी?
‘सरकारबाट विभेदकारी निर्णय भएको छ। यसबाट हामीलाई अन्याय भएको छ। सरकारले यो निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्छ,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘कोभिड नियन्त्रणका लागि हामी व्यवसायी तयार छौं। व्यवसायी त खरानी भइसकेका छन्। तर, राज्यबाट समेत हामीमाथि विभेदकारी निर्णय भएको छ।’
सार्वजनिक सवारी साधानमा पहुँचवाला व्यवसायी नभएको र जहाजमा सरकारमै बस्नेहरुको लगानी भएको हुँदा यस्तो निर्णय भएको हुनसक्ने सिटौला बताउँछन्। ‘जहाज पनि विमानस्थलमा मात्रै आउने होला। जहाज बाटोबाटोमा त आउन्न होला। विमानस्थलमा आएका र जानेलाई त गाडीले नै लैजानु पर्ने होला। जसका कारण विमानस्थलमा पनि भिड अवश्य हुन्छ,’ सिटौलाले भने। यात्रुवाहक सवारी साधनमा लगानी गर्ने व्यवसायी त खरानी नै भएको उनको दाबी छ। विमानस्थल हिँडेको नाममा यहाँ भिडभाड बढ्ने उनको तर्क छ। ‘सरकार सबैको अभिभावक हो,’ उनले भने, ‘अभिभावकले नै विभेदकारी निर्णय गर्नु गल्त हो।’ सरकारीको निर्णयमा दुविधा र वैज्ञानिक नभएको समेत सिटौला बताउँछन्।